Yakaputirwa vana | Kicheni Mapepa
Renee | | Nyama Recipes, Nyore Mapepa
Nhasi tichaedza imwe nzira yakapusa yekubika dzimwe steaks mune muto unonaka. Kudya uku kunonzi vakamonera vana, uye tichavagadzirira chaizvo sezvakaitwa naambuya vangu pandakanga ndiri mudiki. Pasina mubvunzo kutaura, iri zita harina kurira zvakanaka kwandiri. Chii icho icho kudya vana? Icho chaicho chakakomberedzwa nyama mupumburu, ndinofunga zita rayo rinouya kubva pakuonekwa ivo vakaita sevacheche pavakange vakasungwa kana kupomberwa mummified mune dzimwe nguva. Kunyangwe ivo vava kuti nzira iyi yekuputira vana yaive nehungwaru.
Nguva yekugadzirira: Makumi mapfumbamwe.
Yenyuchi steaks (2 pamunhu)
zvidimbu zve serrano ham
yakanyunguduka chizi zvimedu
1 girazi rewaini tsvuku
Isu tinoisa fillet mundiro uye tinowaridza chidimbu che ham kumusoro, uye panoperera zvakanyanya tinoisa chizi, maorivhi maviri uye asparagus. Isu tinotenderera tichitanga kubva kumagumo uko zvirimo uye nekuchengetedza mupumburu neinotopick.
Isu takatounganidza ma roll ese saka tinoisa mafuta neoiri kuti tidziye mukotokore.
Kana musanganiswa wemafuta uye bhotoro uchipisa, isu tinoronga mipumburu pazasi uye nekuisa brown pamativi ese. Isu tinobva tawedzera waini uye hanyanisi muhari uye tozvichengeta pamusoro pekupisa kushoma kusvikira mashall ari nyoro.
Panguva iyoyo tinowedzera mazambiringa akaomeswa, maorivhi uye teaspoon yenyuchi yechibage uye imwe yekubvisa nyama. Tinosiya zvishoma pamoto kusvikira muto watora kusagadzikana. Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti isu hatishandise munyu, nekuti iyo Serrano ham nemiorivhi zvinongopa iko chete kubata kwakanaka kwemunyu.
Nhasi tichaperekedza vana vakamonerwa nesadza rakasviba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Nyama Recipes » Vakaputirwa vana
zvakanaka izvo ! Ivo vari kukukunda iwe zuva rega rega, ndakafarira iyi yakashandurwa nzira.
Caroline tsime rezita rokutanga akadaro
YAKANAKA RECIPE UYE ZVIMWE ZVINOKOSHA
Mharidzo yedhishi iyi inonakidza. Anga achindiudza kuti ndadya. Ini zvechokwadi ndinogadzirira pane rakakosha zuva.
Omelette nemadomasi uye ham
Zvivakwa zvemasikirwo ejusi